An-jatony no mararin` ny aretina isan-andro. Tamin`ny zoma lasa teo dia nahatratra 101 ny tarehimarika ho an` ny tontolo andro ary miakatra hatrany. Raha atambatra dia mahatratrata 2000 mahery no voan` ny aretina dengue. Nisy fanadiovana faobe ny talata lasa teo tao Mahajanga mba hahafahana misoroka ny aretina. Raha ny nambaran` ny tomponandraikitra ara-pahasalamana any an-toerana dia tsy ampy ny fanafody iadiana amin` izany aretina izay ary miandry paikady apetrakin` ny fitondram-panjakana kosa ny rehetra.